St. Helena waa British, Afrikaan, COVID-Free oo hadda ku xiran Google
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Guddiga Dalxiiska Afrika » St. Helena waa British, Afrikaan, COVID-Free oo hadda ku xiran Google
Guddiga Dalxiiska Afrika • Wararka Ururada • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • News • Dib-u-dhiska • Technology • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka
2018 St. Helena waxay qayb ka noqotay Afrika markii ay ku dhawaaqday inay xubin ka tahay Guddiga Dalxiiska Afrika sannadka 2019.
Arrimaha isgaarsiintu waxay ka hor istaageen Dhulkan Ingiriiska ee Badweynta Atlantikada Koonfureed inuu isku xidho.
Maanta waxay calaamad u tahay daqiiqad taariikhda dhijitaalka ah iyada oo fiilada internetka ee 'Equiano undersea fiber optic internet cable' ay ku degto jasiiradda St Helena oo ku taal Koonfurta Badweynta Atlantikada, taasoo ka dhigaysa Dhulkan Fog ee Ingiriiska ee Dibedda ah inuu yahay kaabiga ugu horreeya ee xeebta ka soo dega mashruuca Equiano ee u dhexeeya Yurub iyo koonfurta Afrika.
Bishii Diseembar 2019, Dowladda St Helena (SHG) waxay heshiis la saxiixatay Google si ay ugu xirto Jasiiradda St Helena ilaa xarigga internet-ka fiber-optic ee badda hoosteeda ee Equiano, iyadoo gaarsiineysa St Helena xawaarihiisii ​​ugu horreeyay ee ugu horreeyay, isku xirnaanta fiber-optic.
Tani waxay calaamad u tahay xilligii teknolojiyadda cusub ee jasiiradda labaad ee ugu fog fog ee adduunka waxayna saameyn weyn ku yeelan doontaa maahan nolol maalmeedka dadka deegaanka, laakiin waxay awood u leedahay inay soo jiidato maalgashiga gudaha iyo dalxiiska.
Saint Helena waa hanti Ingiriis ah oo ku taal Badweynta Atlantikada Koonfurta.
Google ayaa kaliya ku xirtay St. Helena oo ah Gobolka Dalxiiska Afrika ee Ingiriiska ee xorta ah
Illaa iyo hadda COVID-19 lama yaqaan gobolkan fog ee adduunka.
Jasiiraddan kulaylaha ah ee kulaylaha fogfog waxay jiiftaa 1,950 kiiloomitir (1,210 mi) galbeedka xeebta koonfur -galbeed Afrika, iyo 4,000 kiiloomitir (2,500 mi) bariga Rio de Janeiro ee xeebta Koonfurta Ameerika.
Markabka lakabka fiilada Teliri, oo xambaarsan xadhkaha, ayaa ka yimid Walvis Bay markay ahayd 31 Ogosto 2021 ee Rupert's Bay. Dhamaadka fiilada ayaa laga soo tuuray dhinaca markabka, dabadeedna qubeeyayaashu waxay fiilada geliyeen dhuumaha hore loo dhigay, laga bilaabo 6-da subaxnimo ee maanta. Dhamaadka fiilada waxaa lagu rakibay Saldhigga Dhulka ee Modular Cable Landing Station (MCLS) ee Rupert, halkaas oo fiilada ay ku xirmi doonto kaabayaasha dhijitaalka ah ee jasiiradda. Horaantii bishaan koox ka kooban laba iyo toban shaqaale ah ayaa ku yimid duulimaad kiro ah oo ka yimid UK, France, Greece iyo Bulgaria si ay u fududeeyaan soo dejinta fiilada iyo tijaabinta qalabka quudinta korantada ee Saldhigga Degitaanka.
Madaxa Horumarinta Joogtada ah ee SHG, Damian Burns, ayaa faallo ka bixiyay: “Mashruucan wuxuu udub dhexaad u yahay Istaraatiijiyadda Dijital ee St Helena waana inuu wax weyn ka beddelaa nolol maalmeedka dadka deggan. Fursadaha waxbarasho ee onlaynka ah waa in la beddelaa, fursadaha maalgashi ee cusub waa in la furaa, dadka deggan jasiiraduhu waa inay si fiican u helaan adeegyada telemedicine, waana inaan awoodnaa inaan ka soo jiidanno reer guuraaga dhijitaalka ah meel kasta oo adduunka ah.
Burns ayaa ku hadlaya: Fiilada Equiano waxay St Helena ku dhejineysaa khariidadda dhijitaalka ah, in kasta oo aan sii ahaannay COVID-la'aan, saameynta masiibada adduunka waxay la macno tahay inay tahay inaan soo bandhigno karantiil iyo tallaabooyin kale oo ka hortag ah xuduudaheena, oo saameeya ganacsiga iyo dalxiiska jasiiradda. Maalintan weyn waxay calaamad u tahay daqiiqad muhiim ah oo aan arki karno mustaqbal rajo leh oo soo kabasho iyo barwaaqo ah.
Laanta fiilada St Helena waa qiyaastii 1,154km waxayna jasiiradda ku xiri doontaa jirridda ugu weyn ee fiilada Equiano, oo ku xirnaan doonta Yurub iyo koonfurta Afrika. Xawaaraduhu waxay u dhexeeyaan dhowr boqol oo gigabits ilbidhiqsi ilaa terabit badan, aad uga dhakhso badan adeegga dayax -gacmeedka ee hadda jira.
Fiiladu si toos ah ayay u socon doontaa marka laanta St Helena iyo jirridda ugu weyn ee fiilada Equiano la dhigo, la xoojiyo, lana tijaabiyo; iyo marka kaabayaasha maxalliga ah iyo bixiyaha ay meesha joogaan oo ay diyaar u yihiin inay ku noolaadaan St Helena.
Tani sidoo kale waa war wanaagsan Dalxiiska St. Helena, xubin ka ah Guddiga Dalxiiska Afrika